Me and My Religions_Part 1 (June 7/2021) – PVTV Myanmar
wai yan min khant says:
2021-06-07 at 12:56 PM
Not.T-Xack [ Offical Youtube Channel ] says:
2021-06-07 at 3:17 PM
Very thoughtful and intriguing.
When I turned 18, I also putablank in "Religion" section. They told me the form is incomplete. So I put Buddhism just to avoid more conversations.
chan thar oo says:
2021-06-07 at 4:33 PM
That’s why we so call “Sayar Kyar”
Ngwe Soe says:
အခုမဲခိုးတယ်လို့ ပြောတာကို ယုံတဲ့လူ မယုံတဲ့လူ လည်းဒီလိုပါပဲ လက်တွေ့အတိကျ မပြနိုင်ပဲ ယုံနေတဲ့သူတွေရယ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဖြုတ်ချချင်တဲ့သူတွေရယ် ဟိုဟာရမှ ဒီဟာရမှဆိုပြီး အသက်တွေအပေါ်တန်ဖိုးဖြတ် ကစားနေတဲ့သူတွေရယ် ဟိုဘက်လည်းကြောက်ဒီဘာက်ကြောက်ရဆိုတဲ့ တစ်ဘို့တည်းသမားတွေရယ် အမှန်နဲ့အမှားကို အတ္တတွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်
Agree I’m deeply troubled by Myanmar ID which include religion.! It only make peoples to divide base on religions
2021-06-09 at 8:21 PM
I love it, wish to listen more.
Moe Htet Zaw says:
2021-06-11 at 11:11 PM
သိပ်မကြာခင်ကမှ ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကပဲ ဘာသာ၊ လူမျိုး ခွဲခြားတဲ့စိတ် မရှိသ‌လောက်မို့လား မသိဘူး conflict ဖြစ်ရပ်ထက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံတွေကို သဘောပေါက် လိုက်နာဖို့ ဆရာတော်က သတိပေး ဆုံးမထားတယ်လို့ ပုဂ္ဂလအနေနဲ့ ခံစားသိရတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ဆရာကြီးပီမိုးနင်းအဆိုအမိန့်(အတိအကျမမှတ်မိ)လို "ထက်မြလှစွာသောဒါးသှ် တိုက်ပွဲဝင်နေသော သူရဲကောင်းအတွက် သိပ်ကိုအသုံးတည့်၍ ကလေးလေးတယောက်အတွက်တော့ အလွန်အန္တရာယ်များသည်"ဆိုတဲ့အတိုင်း တချို့လူတွေအတွက်တော့ သတိထားဖို့ တော်တော်လိုမယ်လို့ ထင်တယ်။
ကိုကျားရေ အချိန်အခါလဲ သင့်၊ ချိတ်ဆက်ပြောဆိုရှင်းပြတာလဲ အလွန်ကောင်း။ လေးစားပါတယ်ခင်ဗျား။ နောက်ထပ်နောက်ထပ်တွေလဲ စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်။ ✌🏼 take care bro။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
Dr.Thet Thet says:
I wished you studied more than these steps about religions.
I found out Nice talks and highlights.
Still needed to be logical.
2021-06-13 at 9:46 AM